Inona no atao hoe test acid in geology?
Calcite ao Acid Chloride
The Test Acid. Andrew Alden
Ny mpahay siansa matanjaka rehetra dia mitondra siny kely siramamy 10 isan-jato mba hanatanterahana io fitsapana haingana io, izay ampiasaina hanavaka ny vato karbôna mahazatra indrindra, dolomita , ary vatosokay (na marbra , izay mety misy mineraly). Vitsy kely ny asidra no napetraka eo ambonin'ny vatolampy, ary mameno ny vatosokay amin'ny alàlan'ny fitsapana mafy. Ny dolomite dia mibaribary tsikelikely. Ireto misy sary vitsivitsy natao tamin'ny sehatr'asa voafetra.
Ny asidra hydrochloric (HCl) dia azo ampiasaina amin'ny fivarotam-panafody toy ny asidra muriatic, amin'ny fampiasana amin'ny fanadiovana ny plastika amin'ny betona. Ho an'ny fampiasana ny faritra ara-jeolojika, ny sira dia mihena ho 10 isan-jato mahery ary mitazona anaty tavoahangy kely misy menaka. Ity sary ity ihany koa dia mampiseho ny fampiasana vinaingitra ao an-trano, izay mora kokoa nefa mety ho an'ny mpisera indraindray na mpakafy.
Ny kalsita dia manamboatra marika marbra mamelatra mafy amin'ny fomba mahazatra 10 isan-jato amin'ny solika saline. Ny fanehoan-kevitra dia mivantana sy tsy azo ovaina.
Dolomita ao amin'ny Acid hydrochloric acid
Ny Dolomita avy amin'ny marika marbra dia manasitrana avy hatrany, fa malefaka, amin'ny 10 isan-jato HCl vahaolana.
Calcite amin'ny Acetic Acid
Bits of calcium from a bubble of gum toughly acidic , even in acetic acetic acid such as vinegar vinegar. Ity mpisolo toerana asidra ity dia mety amin'ny fihetsiketseham-pianarana na tanora geologista.
Fantatsika fa karazana karbona izany noho ny hamafiny (eo amin'ny 3 eo amin'ny maingotra Mohs ) sy ny kalkite na dolomite amin'ny loko sy ny tsipika tsara. Iza io?
Tsy nahomby ny fitsaboana Calcite
Ny mineraly dia aseho amin'ny asidra. Calcite bubbles mora amin'ny asidahana mangatsiaka. Tsy kaleta izany. (eto ambany)
Ny mineraly fotsy hoditra mahazatra indrindra ao amin'ny vondrona kalkita dia manao fihetsiketsehana amin'ny asidra mangatsiaka sy mafana, toy izao manaraka izao:
Calcite (CaCO 3 ): bubbles mafy amin'ny asidra mangatsiaka
Magnesite (MgCO 3 ): ny bubbles amin'ny asidra maina
Siderite (FeCO 3 ): bubbles amin'ny asidra maina
Smithsonite (ZnCO 3 ): bubbles amin'ny asidra maina
Ny kalcite dia amin'ny ankapobeny no mahazatra indrindra ao amin'ny vondrona kalkita, ary izy irery ihany no toa ohatrin'ny karazan-tsika misy antsika. Na izany aza dia fantatsika fa tsy kaleta izy io. Indraindray dia miteraka masom-bary fotsy ny magnesite tahaka ny santionantsika, fa ny tena ahiahiana dia dolomite (CaMg (CO 3 ) 2 ), izay tsy ao amin'ny fianakaviana kalsita. Miboiboika kely mangatsiaka amin'ny asidra mangatsiaka izy, mafana fo amin'ny asidra maina. Satria mampiasa vinaingitra malemy isika, dia hampidina ny karazam-borona mba hampiakatra haingana kokoa ny fihetsiketsehana.
Ny harena an-kibon'ny tany miafina dia miorina amin'ny fitrandrahana tanana. Mariho ireo rôbôma tsara tarehy, marika famantarana ny mineraly karbona.
Dolomita amin'ny Acetic Acid
Bola dolomita vita amin'ny dolomita dia mangatsiaka ao anaty ranomamy mangatsiaka mangatsiaka ary (aseho eto) amin'ny vinaingitra mafana. Ny siramamy saline dia aleony lavitra noho ny fihanaky ny dolomite raha tsy izany dia miadana be.
Famaritana sy Fanehoan-kevitra momba ny fiovan'ny toetrandro
Ahoana no nanombohan'ny Universe?
Moa ve ny Astronomia, ny Astrophysics ary ny Astrolojia?
Nahoana no fotsy hoditra?
Lisitry ny metaly Noble
Ny fototry ny teleskaopy
Nahoana no misy ny toetr'andro sy ny rivotra mahery vaika?
Mendelevium Facts - Element 101 na Md
Ny Speed ​​of Light: Izany no fivoahana haingam-pandeha faran'izay haingana indrindra!
Ahoana ny fiforonan'ny rahona? - Cloud Ingredients and Formation
Georges-Henri Lemaitre ary ny Fahaterahan'izao rehetra izao
Fiaramanidina kafe sy kôlômbiôma
Astronomia sy Gazety Gazety no mampiseho anao ny Cosmos
Ny fandaharana tsara indrindra amin'ny "alina mangina" nataon'ny mpanakanto Kristiana & Filazantsara
Classic Quotes avy amin'ny American American mpandresy Oscar
The Crossover by Kwame Alexander - 2015 Mpandresy medaily John Newbery
Spray Paint a RC Body
Euthanasia ao Zoos
Universal Design - Architecture ho an'ny rehetra
Ny mombamomba ny kisary rehetra
12 Ireo labozin'i Hercules (Herakles / Herakla)
Ny olana atoro an'i Bohr Atom Energy Change
Inona no anaran'ny tompony?
Nahoana i Afrika Atsimo no manana renivohitra telo?
Linear A - Rafitra fanoratana tsy manavaka ny Minoans
Superman 7 lehibe indrindra
Ahoana no hialana amin'ny fianarana Ivy League?
Luminescence Dating - Cosmic Method of Dating Dating
Mamolavola ny fanombantombanana momba ny fandaniana ny Blooming Bloom
Lisitry ny karazana sodina 25 sodina
C ++ ho an'ny mpianatra - Mianara momba C ++
Ahoana no fomba fanaovana fiverenana an-doha amin'ny 5 tsotra